स्वास्थ्य समूहको सचिव हुन नदिन मन्त्रालयका प्रशासन सचिव अर्यालको चलखेल – Health Post Nepal
स्वास्थ्य समूहको सचिव हुन नदिन मन्त्रालयका प्रशासन सचिव अर्यालको चलखेल
२०७८ असार २९ गते १२:२५
रिक्त स्वास्थ्य सचिवको बढुवामा प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल तीब्र चलखेलमा लागेका छन्। आफूअनुकूलको मानिसलाई सचिव बनाउन उनले लामो समयदेखि रिक्त प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने र प्रभावित पार्ने चलखेल जारी राखेका छन्।
पछिल्लोपटक रिक्त स्वास्थ्य प्राविधिक सचिव पदका लागि मन्त्रालयबाट सूची पठाउँदा बरिष्ठता क्रम नै मिचेका छन्।
१२ औं तहमा बढुवा हुने समयमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा. रोशन पोखरेलको नाम पहिलो नम्बरबाट हटाइदिएका छन्। पोखरेल बरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पनि पहिलो नम्बर थिए।
उनले पछिल्लो पटक नयाँ आधार र तर्क खडा गरेर पोखरेललाई पछाडि पारेका छन्।
उनले पहिलो नम्बरमा दोस्रो नम्बरमा रहेका डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको नाम उल्लेख गरेका छन्।
सचिव रिक्त भएपछि दौडमा रहेका व्यक्तिलाई अनेक विवादमा तान्ने र सचिव हुन नदिने रणनीति उनको छ। सुरुदेखि नै उनी स्वास्थ्यमा ‘फुटाऊँ र राज गर’को रणनीतिमा छन्।
सचिवको दौडमा प्रमुख दावेदार १२औं तहका तीनजनालाई उनले फरक–फरक आश्वासन र रणनीति लिएर स्वास्थ्य सचिव नै हुन नदिने चलखेलमा छन्।
उनले बीचमा दरबन्दी नै नरहेको भन्दै प्रक्रिया नै रोकिराखे। अहिले सामान्य प्रशासनले मन्त्रिपरिषदबाट दरबन्दी कायम राखिएको भन्दै बरिष्ठता सूची पठाउन ताकेता गरिरहेको छ।
बरिष्ठता सूची आउनासाथ सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगको बढुवा समितिले विज्ञसमेत छनौट गरेर तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अझै मन्त्रालयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाएर डाक्टर सचिव आउँनै नदिने रणनीति अर्यालको छ।
सोही क्रममा उनले अहिले सामान्य मन्त्रालयमा बढुवा सूची पठाउँदासमेत बरिष्ठता मिच्नुका साथै अनावश्यक नामसमेत पठाएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार स्वास्थ्य सचिव हुनका लागि १२ औं तहमा कार्यरत वा ११औं तहमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यसका लागि प्रशासनसम्बन्धी विशेष तालिमसमेत लिएको हुनुपर्छ। अहिले उनले प्रक्रियालाई लम्ब्याउन ११ औं तहमा ५ वर्ष पुगेका तर तालिम नै नलिएकाहरुको समेत नाम पठाइदिएका छन्।
१२ औंका तीनमध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेका पब्लिक हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका महेन्द्र श्रेष्ठका लागि सरकार अनुकुल रहेका समयमा उनले ‘ओम्नी खरिदमा जोडिएको’ भन्दै अगाडि आउन दिएनन्।
उनी अहिले सबै प्रक्रिया रोक्ने र साउनमा १२औं तह रिक्त भएपछि डा. गुणराज लोहनीलाई १२औं तह र सचिव बनाउने योजनामा रहेको निकटसँग बताउँने गरेका छन्।
बरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेका पोखरेलका सम्बन्धमा ‘कांग्रेस समर्थक’ भन्दै माथिल्लो तहमा नकारात्मक ब्रिफिङ गर्दै आएका छन्।
उनले पछिल्लो पटक डा। श्रेष्ठलाई सचिव बनाउन भूमिका खेल्ने वचन दिएका छन्। तर, भित्रभित्र स्वास्थ्यका चिकित्सकमाझ अन्तरद्वन्द्व बढाएर उनीहरुबाटै प्रक्रिया प्रभावित पार्ने रणनीति अर्यालको छ।
‘श्रेष्ठको नाम अगाडि सिफारिस गरेपछि डा. पोखरेलले प्रक्रियामा विरोध जनाउँछन् र प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भन्ने बुझाई अर्याल सचिवज्यूको छ’, मन्त्रालयकै प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले बरिष्ठता क्रम भत्काएर विवरण पठाउन मिल्दैन भन्दाभन्दै उहाँले यो गर्नु भयो।’
त्यहीअनुसार उनले पछिल्लोपटक सामान्यमा सूची पठाउँदा नै चलखेल गरिरहेका छन्। सामान्यमा गएको सूची लोक सेवामा गएपछि लोक सेवाको बढुवा समितिले कम्तिमा तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्छ।
अघिल्ला मन्त्रालय र करिअरमा आफूलाई डेमोक्रेट भन्दै हिड्ने अर्याल अहिले ओलीको विश्वास पात्र मानिन्छन्। उनी स्वास्थ्यमा आफूले राम्रो काम गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयको सचिव हुने दाऊ र लविङमासमेत छन्।